तपाई कस्तो सपना देख्नु हुन्छ ? (सपनाको फल) - IAUA
ramkrishna December 24, 2016	तपाई कस्तो सपना देख्नु हुन्छ ? (सपनाको फल)
१) दृष्ट – जुन चीजलाई हामी जागृत अवस्थामा आफ्नो आँखाले देख्दछौँ । यदि त्यसैलाई राति सुत्दा देखिएमा त्यसलाई ‘दृष्ट स्वप्न’ भनिन्छ ।
२) श्रुत- जसलाई हामीले जान्छौँ र सुन्छौँ, यदि त्यही स्वपनमा देखाइदिएमा त्यसलाई ‘श्रुत स्वप्न’ भनिन्छ ।
३) अनुभूत – जुन चीजलाई जागृत अवस्थामा इन्द्रियहरूद्वारा अनुभूत गरिएको छ । यदि त्यही सपनामा देखिए, त्यसलाई ‘अनुभूत स्वपन’ भनिन्छ ।
४) प्रार्थित स्वप्न – जागृत अवस्थामा जुन चीजको हामी इच्छा राख्दछौँ । यदि त्यही सपनामा देखिएमा त्यसलाई ‘प्रार्थित स्वप्न’ भनिन्छ ।
५) कल्पित स्वप्न- जुन चीजलाई नदेखिएकै छ, न सुनिएकै छ, न अनुभव नै गरिएकै छ । न, त्यसको इच्छा नै राखिएको छ । तर जाग्रत अवथामा त्यसको अनुमान या कल्पना त गरिएको छ र त्यही चीज सपनामा देखिएमा त्यसलाई ‘कल्पित स्वप्न’ भनिन्छ ।
६) भाविक स्वप्न- जुन चीज नदेखिए छ, न सुनिए छ, न अनुभव गरियो, न जसको इच्छा नै राखिएको छ, न कल्पना नै गरिएको छ, यदि यस्तै सपना राति देखिएमा यस्तो विलक्षण सपनालाई ‘भाविक स्वपन’ भनिन्छ ।
७) दोषज स्वप्न- जुन सपना, पित्त, कफ, यी तीन, दोषबाट आउँछ, त्यसलाई ‘दोष स्वप्न’ भनिन्छ ।
वाग्भटमा लेखिएको छ कि यीमध्ये दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित, कल्पित, दोषज, छ प्रकारको सपना एवं दिनमा देखिएको, देखेर बिर्स अत्यन्त लामो एवं अत्यन्त छोटो सपना निस्फल रहन्छ अर्थात् यसको फल न शुभ हुन्छ न अशुभ । केवल छोटे ‘भाविक स्वपन’ मात्रै आफ्नो फल दिन्छ । वङ्गसेनले लेखनुभएको छ कि आफ्नो प्रकृतिअनुसार देखिएको स्वप्न -बाट प्रकृतिवाला आकाश गमन गर्दछ, पित्त प्रकृतिवाला सपनामा आगो देख्दछ र कफ प्रकृतिवाला जलासय आदि देख्दछ ।) जुन सपना देखिएर बिर्सिएको छ दिनमा देखिएको छ, जुन कुनै प्रकारले विचार गर्दा देखिएको हो, यी सबै सपना निष्फल हुनेछ । एउटा सपना देखेपछि अर्को सपना आएमा, पहिलो सपना नष्ट हुन्छ । अर्थात् कुनै पनि शुभ या अशुभ फल दिँदैन । त्यसै ग्रन्थमा के पनि लेखिएको छ भने बारम्बर देखिएको, कल्पना गरिएको इच्छित, अजर्ीण्ा हुँदा देखिएको सपना पनि प्रायः निष्फल हुन्छ ।
फूल – प्रेमी/प्रेमिका मिलन
पान खानु – स्त्री प्रसङ्ग -यौनसम्बन्ध) हुने
पिँजडा – जेल-नेल पर्ने
ग्रहण – आपत पर्ने
बिरालोले टोक्नु -दर्घटना पर्ने तर बच्ने
Previous Previous post: सबैभन्दा सफल र धेरै नाफा हुने यी हुन् १० व्यवसाय
Next Next post: किन र कसरी देखिन्छ सपना ?